'हिन्दुराष्ट्र माग्नु अपराध होइन' - BBC News नेपाली
नेपाल-भारत सम्बन्धको चर्चा गर्दा पछिल्लोपटक हिन्दुराष्ट्रको मुद्दा अनौपचारिक रुपमै भएपनि व्यापक रुपमा उठ्ने गरेको ठानिन्छ। हिन्दुवादी पार्टीका रुपमा चिनिने भारतीय सत्तारुढ घटक बीजेपीका पूर्वउपाध्यक्ष भगतसिंह कोश्यारी पनि हिन्दुराष्ट्रको मुद्दाको पक्षधर नेताको रुपमा धेरैले चित्रण गर्ने गर्छन्। प्रबुद्ध समूहको बैठकका लागि नेपाल आएका बेला उनै कोश्यारीलाई बीबीसी नेपालीका महेश आचार्यले भेटेर गरेको कुराकानी तल प्रस्तुत छ:
कुनै सार्वभौम मुलुक हिन्दुराष्ट्र हुनुपर्छ वा पर्दैन भनेर किन तपाईंहरुको यति धेरै चासो?
मैले हिन्दुराष्ट्र हुनुपर्छ वा पर्दैन भनेर मैले अहिलेसम्म न सार्वजनिक रुपमा न त व्यक्तिगत तवरमा केही भनेको छु। तर नेपालमा ९० प्रतिशत हिन्दु छन्। त्यस्तो देशलाई हिन्दुराष्ट्र नभनेर अरु भनेपनि के हुन्छ र? गुलाबलाई अर्को नामबाट बोलाएपनि वासना त त्यही छर्छ भनेर शेक्सपियरले पनि भनेका छन्। मेरो मुख्य चासो चाहिँ यो हो कि नेपाल र भारत दुई फरक देश हुन्, दुवै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हुन्। संस्कृतिले जोड्छ, राजनीतिले तोड्छ। त्यसैले सांस्कृतिक सम्बन्ध मजबुत बनाउनुपर्छ। सांस्कृतिक सम्बन्ध बलियो भए देश पनि बलियो बन्छ।
तर तपाईंकै पार्टीभित्रै पनि, अनि पार्टीको भातृसंगठन र बाहिर पनि नेपाल हिन्दुराष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने मत प्रबल रुपमा देखिन्छ नि भारतमा?
जहां हिन्दु हुन्छन्, उनीहरुले हिन्दुराष्ट्रको बारेमा बोल्नु के अपराध हो र? त्यसो भन्न पाउनु उनीहरुको अधिकार पनि हो। भारतमा प्रजातन्त्र छ, कुनै तानाशाही त छैन नि।
तपाईको दल बीजेपी सरकारमा आउनुपूर्व तपाईकै पार्टी अध्यक्षले सार्वजनिक रुपमै नेपाल हिन्दुराष्ट्र हुंदा उपयुक्त हुन्छ भनेर बोलेका थिए। के अहिले सरकारमा आएपछि तपाईहरुको दलको त्यो विचार फेरिएको हो त, त्यसो भने?
अहिले हामी सबैजना के विषयमा चिन्तित छौं भने नेपालमा स्थायित्व होस्, शान्ति होस्, विकास होस् र नेपाल अगाडि बढोस्। यदि शान्ति भएन, विकास भएन भने रामराज्य भन्नुस् वा अरु केही भन्नुस्, केही हुनेवाला त छैन।
यसको मतलब बाहिर चर्चा भएझैं भारत नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भएकोमा चिन्तित छैन?
यो त नेपालकै जनताले सोच्छन् नि। हामीले किन मार्गनिर्देश गर्ने?
आवरणमा यस्तो टिप्पणी त आउंछन्, तर भित्रभित्रै भारतले त्यसका लागि दबाब दिएको भन्छन् नि?
नेपाली जति नै धर्मनिरपेक्ष भनेपनि उनीहरु निकै लचिलो छन्। म बारम्बार भन्ने गर्छु कि हाम्रो देशमा पनि कम्युनिष्टहरु छन्, तपाईंहरुकोमा पनि एमाले छ, माओवादी छ। उनीहरुमा समय र परिस्थितिअनुसार ढल्न सक्ने क्षमता छ-- उनीहरु भारत पुगेभने तिरुपतिको दर्शन गर्न जान्छन्। तर हाम्रा मार्क्सवादीहरु यहां आउंदा पशुपतिको दर्शन गर्न जांदैनन्। यसको अर्थ नेपालका मानिसहरु लचिलो छन्। धर्मनिरपेक्षता एउटा अस्पष्ट शब्द हो। धेरै राष्ट्रले आफूलाई धर्मनिरपेक्ष भनेका छन्, त्यसलाई हामी निन्दा पनि गर्न सक्दैनौं।
अर्को प्रसंगमा, तपाईंले अघिल्लोपटक नेपाल आउंदा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसंग भेट्नुभयो, किन?
मलाई यो लाग्दैन कि पूर्व राजासंग भेट्नु कुनै अपराध हो। उहां यहांको एक नागरिक हो। कोही नागरिक मसंग भेट्न चाहन्छ भने म सोच्छु कि त्यो मेरो कर्तव्य हो। यहां त म कांग्रेससंग पनि भेट्छु, कम्युनिष्टसंग पनि भेट्छु, सबैसंग भेट्छु। भारतबाट कोही आयो भने राजासंग भेट्नुहुंदैन भनेर यहांको संविधानमा लेखेको त छैन होला नि? त्यस्तो लेखेको छ भने, ठीकै छ, भेट्दिन।
यसपालि पनि भेट्दै हुनुहुन्छ कि?
होइन होइन, त्यस्तो कुनै प्रसंग पनि छैन। मैले पूर्वराजालाई कहिले भेटेको थिइनँ, तर उहांले धेरै पहिलेदेखि भेट्ने इच्छा व्यक्त गर्नुभएको थियो। अरुलाई भेट्नुहुन्छ, मलाई भेट्नुहुन्न भन्नुहुन्थ्यो उहां र मैले उहांलाई आफू पूर्वाग्रही नभएको बताएँ। समय नमिलेर मात्रै हो। अघिल्लोपटक समय मिल्यो, अनि उहांसंग १० मिनेट भेटेर आएँ।
त्यो भेटमा के कुरा भयो त?
केही त्यस्तो होइन। सामान्य घरेलु कुरा हो। उहांकी नातेदार मालाराज्य लक्ष्मी हाम्रो दलकी सांसद हुनुहुन्छ। यसैगरेर उहांको ग्वालियरको राजघरानासंग पनि सम्बन्ध छ। मैले उहांलाई ‘तपाईंको यति धेरै सम्बन्ध छ भारतमा, हाम्रा मानिसहरु आवश्यक परे विवाहका लागि सीधा तपाईहरुकहां आउंछन्, तपाईहरु पनि उता जानुहुन्छ। तपाई एकताको सूत्र हो, एकताको सूत्र रहिरहनुस्’ भनेर भनें।
यति मात्रै कुरा भयो भनेर मानिसहरुले विश्वास गर्लान् र ?
अरु के कुरा हुन्थ्यो त नि?
अन्त्यमा, कूटनीतिक रुपमा त भारतले नेपालको मामिला नेपालीले नै टुंगो लगाउने हो भनेर भन्ने गरेपनि उ नेपाल धर्मनिरपेक्ष भएकोमा पछिल्लोपटक असन्तुष्ट छ भन्ने टिप्पणीहरु प्रशस्तै सुनिन्छन्। त्यसलाई धेरैले राजतन्त्रसंग जोडेर पनि हेर्छन्। तपाईको कुरा सन्दा तपाईंहरु असन्तुष्ट भन्ने होइन, त्यसो भने।
मलाई लाग्दैन कि नेपालबारे कसैले यस्तो भन्यो होला भनेर। यहां हिन्दु यतिधेरै छन् कि हिन्दुराष्ट्र नभन्दैमा उनीहरुको काम नै बन्द हुन्छ र, सबैजना क्रिश्रिच्यन बन्छन् वा अर्को धर्म लिन्छन र? भारत वर्षमा कैयौं वर्षसम्म कैयौं इस्लामवादी आक्रमण भए, अंग्रेजहरु, फ्रान्सेलीहरु र पोर्चुगलीहरुले आक्रमण गरे। तैपनि हिन्दुको ठूलो संख्या रहिरह्यो। हिन्दु त सनातन धर्म हो। यो त विशाल संस्कृति हो र त्यो रहिरहोस्। त्यसलाई जे नाम भन्नुछ, भन्नुहोस्।
भिडियो के मधुमेहबाट जोगिन सम्भव छ?
के मधुमेहबाट जोगिन सम्भव छ?
भिडियो च्याउ र ब्याक्टेरियाबाट कार्बनमुक्त ऊर्जा
भिडियो झुट्टा समाचारको चङ्गुलमा कसरी नफस्ने?
झुट्टा समाचारको चङ्गुलमा कसरी नफस्ने?
भिडियो जन्मिएकै दिन छोरीका लागि वर रोज्ने समुदाय
जन्मिएकै दिन छोरीका लागि वर रोज्ने समुदाय
भिडियो प्लाष्टिकको झोला प्रयोग गरे जेल सजाय हुने देश
प्लाष्टिकको झोला प्रयोग गरे जेल सजाय हुने देश
भिडियो बिल गेट्स अनि ‘भविष्यको शौचालय’